Intel dia hanolo ny jack audio 3.5mm amin'ny fifandraisana USB-C | Avy amin'ny mac aho
Intel te-hanafoana ny jack 3.5 mm ho an'ny USB-C
Ny fivoaran'ny teknolojia dia tsy azo sakanana ary toa ny jack an-doha 3.5 mm nentim-paharazana dia nahitana ny androny na toa izany, hatramin'ny Intel, ilay goavambe chip manatevin-daharana orinasa hafa amin'ny fanolorana ny fanoloana an'ity fampidirana audio analog ity amin'ny solosaina nomerika.
Nanamafy izany i Intel satria ireo fitaovana ho avy izay misy ny haitao misy azy, na finday avo lenta, tablette na fitaovana informatika sasany ario ny jack an-telefaona mahazatra ny mifamadika amin'ny USB-C. Nanao ity fanambarana ity ny orinasa tamin'ny valan-dresaka ho an'ny fampandrosoana farany izay nanoloran'izy ireo audio-nomerika USB-C.
Amin'ny fotoana fohy, hiezaka ny hanolo tsotra ny jack klasika amin'ny famaritana audio analog-USB-C i Intel. Nilaza i Intel fa ity hetsika ity io dia mety ho "fanoloana mpampifandray."
Na izany aza mijery ny ho avy izy ireo dia manantena fa ny fandraisana USB-C dia manampy ihany koa rehefa mandray ny dingana farany ny vanim-potoana analogy ary mifindra amin'ny audio nomerika.
Raha ny fahitan'ny mpampiasa azy dia mifindra amin'ny a azo atao output audio mety ho hevitra tsara, izany hoe ny tsara indrindra amin'ny kalitao feo dia miharihary miampy Intel, ilay mpanamboatra semiconductor lehibe indrindra eto an-tany hatreto dia afaka mamorona ny analog amin'ny chip audio audio digital.
Etsy ankilany, misy ny porofo mitombo fa Apple dia mieritreritra hetsika sahala amin'izany, na dia mino aza ny ankamaroan'ny olona fa ilay mpanamboatra iPhone dia misafidy mpampifandray tselatrao manokana raha tokony hampiasa ny fenitra indostrialy, USB-C, farafaharatsiny amin'ny fitaovana iOS (iPhone sy iPad). Izany dia manangana tranga mahaliana miaraka amin'ny ady kely eo amin'ny Intel miaraka amin'ny USB-C sy ny mpampifandray Apple an'ny Apple, ligthning, satria ny fahafahan'ny Intel manomboka manao chips fifandraisana ho an'i Apple dia noresahina tato ho ato.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Intel te-hanafoana ny jack 3.5 mm ho an'ny USB-C
Lahatsary roa amin'ny rakotra anatiny ao amin'ny Campus 2 an'ny Apple no tonga amin'ny tambajotra
Apple Pay dia misoratra amin'ny fifanakalozana 5 heny mihoatra ny tamin'ny taon-dasa